प्रेम कथा | Hamro Patro
२९ साउन २०७७, बिहिवार
ध्रुव गरीजी रोहिणी
बिहानको १२ : १६
लोकेश ढकाल - Aug 28 2017
मायाको पहिलो सौगात स्वरुप
हृदयको मेरो सानो अनुरोध
कोरेर तिमिलाई मायाको,भिक माग्दै छु।
मेरो रोजाइमा मन परेकी सानू
....न्यानो माया अनि मीठो सम्झना.।सानु जिबनमा पहिलो प्रेमपत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु।तिम्रो न्यानो स्नेह र साथको आसामा।
यो पनि हेर्नुहोस् : "कथाकार"मा कथा: छाडी जानेलाई...
सायद तिम्रो मायामा म नजानिदै फस्दैछु र मलाइ साहरा दिइ बचाउने पनि मात्र तिमी छौ यो संसारमा। के मेरो समिपमा आएर मेरो माया स्वीकाछौ भन्ने आसा लिएको छु सानू, भन्छन् माया बस्न एक नजर नै काफी छ यर म त्यसको प्रतिकार गर्थे वाहियात ठान्थे।सोच्थे,यो त सब भन्ने कुरनै हो। अनि बिश्वास गर्थे यथार्थमा। अरुले गर्ने मायालु भावना कुरामा कहिल्यै बिश्वासै लाग्दैनथ्यो। तर अहिले! म गलत भैरहेछु सानू तिम्रा यी निस्चल र निर्मल नयनका सामु म झुके वा झुकाइए।
तिम्रो एकै नजरले मैले आफुलाइ गुमाए। म नचाहेरै तिमितिर तानिए तर तिमी! तिमी त यो मेरो प्रेमबारे नै अनभिज्ञ छौ, नादान छौ। अचम्म लाग्छ, किन म तिमिसंग अँखा जुधाउन सक्दिन। मेरा अखा अनायसै झुक्छन तिमि सामु हुदा मेरो मनले तिम्रो तस्बिर मात्र हेर्छ के तिमिलाइ मेरो यो अबस्थाको आभास हुदैन?वा तिमी निर्दोष बनिरहेकी छौ सानू जानी जानी म तिम्रो निर्मल आखाको सागरमा डुबुल्की मर्न चाहन्छु, हराउन चाहन्छु अनि भुल्न चाहन्छु आफैलार्इ।
तिमिमा र केबल तिमिमा पुर्ण रुपमा समाहित भएर बस तिमिसंग । ती निलो सागर सिगै बोक्ने तिम्रो नयन ती फोटाहरु अनि मधुर मुस्कन देख्दा लग्छ तिमी मानव नभएर साक्षात ईश्वरको प्रतिबिम्ब हौ। तिम्रो निकटता कल्पिदा संसारका सबै सुख र खुसीहरु मेरा पाउमा झुकिरहेका छन झै लाग्छ के छ खास तिम्रो मुस्कानमा,जसले हरक्षण मलाइ पागल अनि पागल बनाउदै लगिरहेको छ तर यो पागलपन उफ! कस्तो आनन्दको आभास, तिमिलाइ एउटा कुरो भनौ? मेरा अँखाहरु तिमिलाइ नै खोजिरहेछन हरक्षण तिमी आउने फेस्बुकको चेटमा मेरा नजर बिछ्याएर बसिरहन्छु म। केबल तिमिलाइ प्रतेक दिन नियाल्न ।
मैले लिने हरेक शब्दमा तिम्रो प्रेमको मीठो बसनाको अनुभव गर्छु म। मेरो मुटुको हर धड्कन तिम्रै नाममा धड्किरहेका हुन्छ्न। यि ओठ, केबल तिम्रो नाम पुकारिरहेक हुन्छन। के तिमिले सुनेकी छौ सानू मेरो दिलको आवाज? मेरो मनमा प्रवाहित तरङ्ग तिम्रो मनसम्म आइपुगेका छन? तर जेहोस म यो सनो पत्र तिम्रो नाममा कोर्दैछु, एउटा झिनो आशमा कि तिमिले एकदिन मेरो भावना बुझ्नेछौ ! मेरो मनको चाहनालाइ चिहान बन्न दिनेछैनौ! तर यो त मात्र मनको आस नै हो जुन पूरा नहुन पनि सक्छ।
तिमी बिश्वास गर य नगर मेरो माया सागर जस्तो निर्मल र पबित्र छ बादल जस्तो शितल छ, बसन्तको सौन्दर्य जस्तो सुन्दर छ, गोधुली साझ जस्तो शान्त छ अनि सुधा जस्तै आमर छ तर मेरो मायालार्इ स्बिकार गर्नु या नगर्नु त्यो त तिम्रो इच्छाको कुरो सानू । म त फेरि गरिब परिवारको एक्लो छोरा तिमिले स्वीकार्यौ भने सबैभन्दा धेरै ठूलो खुसी मिल्नेछ मलाइ !
तिम्रो न्यानो काखमा असिम माया पोखिदिनेछु छताछुल्ल हुने गरि,अनि हराउनेछु तिमिभित्र। अस्विकारै गरेपनी म दु:खि हुने छैन! मलाइ थाहा छ मैले तिमिलार्इ निस्वार्थ प्रेम गरेको छु। मैले मेरो हरेक क्ष्रसका झोक्का तिमिप्रती समर्पित छ अनि अत्यन्तै प्रगाढ र गाढा। म तिमीप्रतिको प्रेमले मेरा हरेक अवयवहरुमा सिन्चित गरेर राख्नेछु अनि जिउने प्रयास गर्ने छु तिम्रै प्रेममा। मेरो मायमा स्वार्थ नै छैन अनि मैले तिमिलार्इ जबर्जस्ती पाउने चेष्ठा गरेको पनि छैन।
मेरा लागि प्रेम आत्मिय बन्धन हो जहाँ मनसंग मनको गहिराइ नापिन्छ र यो अटुट रहन्छ। के तिमी मेरो यो मीठो अनुरोध स्वीकार गर्छौ? तिम्रो मायामा रम्ने हक सिन्छौ मलाइ? म तिम्रो जवाफ पर्खिरहने, कालान्तरसम्म निस्वार्थ प्रेम गरिरहने छु ।